အချို့သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည် Huawei သို့အစိတ်အပိုင်းများပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Androidsis
အချို့သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည် Huawei သို့အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်တင်ပို့သည်
သူ့အကြောင်းအများကြီးပြောပြီးပြီ Huawei သည်ခက်ခဲသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အဆိုအရ၎င်းသည်တရုတ်ကုမ္ပဏီသို့ကျဆင်းသွားသောအခက်အခဲများနှင့်ပိတ်ဆို့မှုပြိုကွဲခြင်း၏ရှေ့ပြေးသည်တရုတ်အစိုးရနှင့်သူလျှိုလုပ်ခြင်းနှင့်တရားမ ၀ င်သောအပြုအမူများကြောင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆက်နွယ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည် Huawei နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
သိပ်ဝေးကွာသောဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုတွင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Micron သည် Huawei အား၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်ချစ်ပ်များကိုမပေးတော့ပါသို့သော်သူမထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပထမဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဤကုမ္ပဏီနှင့်အခြားသူများသည်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်.
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကကက်ဘိနက်မှအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအတွက်တူညီသောကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်းအမေရိကန်မှအစိတ်အပိုင်းများ (သို့) ကုန်ကြမ်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ပါဝင်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုသာပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။ သူတို့ကယူအက်စ်အေထဲမှာမထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမထိခိုက်ပါဘူး ကုမ္ပဏီအများအပြားသည်ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကို Huawei သို့ပြန်လည်တင်ပို့သည်.
ကြည့်ရသည်မှာ Intel နှင့်အခြားစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များက Huawei သို့တင်ပို့သည့်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ၎င်းကို Micron အကြောင်းပြောပြသည့်သတင်းအချက်အလက်ကအကြံပြုသည် BBC News,။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းအတိအကျမဖော်ပြထားပါ။
Micron ၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ် ဦး ဖြစ်သော Sanjay Mehrotra သည်သတိကြီးစွာ ထား၍ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသတိပေးသည် Huawei ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ "မသေချာမရေရာမှုများ" ရှိနေသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်“ ပမာဏနှင့်ကြာချိန်” ကိုမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ Huawei သို့ထုတ်ကုန်များကိုဆက်လက်သယ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းသတိဖြင့်
သူကဆက်ပြောသည် Huawei ၏ပိတ်ပင်မှုသည် Micron အားဘဏ္itsာရေးတတိယသုံးလပတ်အတွက်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ခန့်ကုန်ကျခဲ့သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏အဓိကဖောက်သည်ဖြစ်သည့်မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်ကယင်း၏အစုရှယ်ယာ ၁၃.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးသင်္ဘောတင်ပို့မှုပြန်လည်စတင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အချို့သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည် Huawei သို့အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်တင်ပို့သည်
အားသွင်းခြင်းသံသရာ - ၎င်းတို့မှာအဘယ်နည်း။ သင်၏ Android ဖုန်းမည်မျှရှိသနည်း။
ရှာဖွေရေးကဏ္inတွင် Instagram ကကြော်ငြာများကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်